Ukalisho lweNetflix: Eyona miboniso bhanyabhanya yoQeqeshiweyo yoVavanyo lwango-2020 - Itv
Eyona Itv Ezona ziNto ziDumileyo zeNetflix zeMidlalo yeTV ka-2020 (Emva koKwakha iiNombolo)
Ezona ziNto ziDumileyo zeNetflix zeMidlalo yeTV ka-2020 (Emva koKwakha iiNombolo)
Kuba asinakuthemba ukubonwa kweNetflix okuzixelileyo, kuxhomekeke kuthi ukufumana ezona mvelaphi zazo zaziwayo.UCHRISTOS KALOHORIDIS / NETFLIX
INetflix ibonwabele unyaka wokubhena ngomnwe kwinxalenye yokuvalelwa ekhaya kunyanzeliswa sisifo secoronavirus. Inkonzo yokusasaza ekhokelela kwintengiso yongeze ngaphezulu kwe-30 yezigidi zababhalisi kwi-2020 kuphela kwaye kufuneka igqithe ngokusesikweni i-200 yezigidi ezihlawula abathengi kwihlabathi liphela ngengxelo yayo elandelayo yomvuzo. Kodwa ekubeni idatha ye-Netflix yokuzixela eyenzekileyo iza ngaphandle kwemvelaphi efanelekileyo kunye nemeko kwaye ayiqinisekiswanga yimithombo yangaphandle, asinakuthemba Ingxelo yabaphulaphuli abasasazekayo ngokungangqinelaniyo. Oko kuthetha ukuba asazi ukuba zithandwa kangakanani izihloko zabo zokuqala. Ke kumzamo wokufumana inyani yenyani, simba nzulu ukuze sifumane ezona zibukeleyo zeNetflix zango-2020.
Bopha amanqaku amaninzi.
I-ANTENNA Ijonga idatha yokuthengiselana kwizigidi zabasebenzisi baseMelika (ngokungachazwanga ngokungacacanga). Sebenzisa le datha, inkampani inokuxela xa abathengi babhalisile, xa beyekile, xa betshintsha iinkonzo, njalo njalo. Ngokwedatha ye-ANTENNA ebonelelwe kuMqwalaseli olandelela ezi ntsingiselo ukusukela nge-1 kaJanuwari 2020 ukuya kwi-30 kaNovemba ka-2020, sinokuqala ukubona ukuba ukuphuma nokuhamba kwabasayina abatsha kuhambelana njani nokukhutshwa kweetayitile eziphambili.
Kodwa loo Matshi spike ikwakhona kwifestile enye kunye nokukhutshwa okuyintloko njengakwii-docuseries I-Tiger King: Ukubulala, iMayhem kunye neMadness (Matshi 20), Ixesha lesibini lomdlalo wolwaphulo-mthetho Ozark (Matshi 27), kunye nexesha lesine le- Imali Heist ( Imali Heist ) (Epreli 3). Ukuqhubekeka kokutshintsha kokuhamba komgaqo kunyaka ophelileyo ubukhulu becala kuyahambelana nezinye izinto zokuqala ezikhutshiweyo kunye nexesha leSibini le I-Umbrella Academy (Julayi 31) Ixesha lesi-5 Lusifa (Agasti 21) kunye nexesha lesi-4 le- Isithsaba (Novemba 15).
Ngelixa oku kungapeyinti umfanekiso wokubukwa okwenziwe ngekhonkrithi, icebisa unxibelelwano oluthe ngqo phakathi kokubhalisa, i-churn kunye nolindelo olukhulu lweentsusa zeNetflix, zisinika umbono wokuba loluphi uthotho olona lufunekayo. Singakuthelekisa oku nolwazi lwethu lokulinganisa ngezantsi.
Ibango labaphulaphuli kunye nokuBukela
Ifom yedatha Uhlalutyo lweparrot 'Inkqubo yokulinganisa abaphulaphuli ithatha idathabheyisi yokuziphatha kwabaphulaphuli. Inkampani ihluza amajelo eendaba ezentlalo, ukulinganiswa kwabalandeli kunye nedatha yobuqhetseba ukumela imfuno yabaphulaphuli, ebonisa umnqweno kunye nokuzibandakanya okuvakalisiweyo kwesihloko ngaphakathi kwintengiso (kule meko, e-U.S.). Ngokwedatha kaParrot ebonelelwe kuMqwalaseli, nazi i-10 zezona zinto zifunwa kakhulu kwi-Netflix ngo-2020.
Ukulungiswa kwakhona -Ukusasaza i-aggregator elandelela yonke imiboniso yeTV kunye nomdlalo bhanyabhanya okhoyo kwi-Intanethi kubasebenzisi bayo base-US abazizigidi ezi-3- yomibini le miboniso yayiyinto ehambelanayo kuludwe lweveki zeNetflix olujongwa kakhulu evekini ukusukela ku-Epreli.
Makhe sijonge ezintlanu eziphambili zikaParrot ngokweendlela zokukhangela zikaGoogle, ukulinganisa ngokungqongqo komdla.
Nielsen kwaye 7Paki ) kunye nabavavanyi (njenge Isicwangciso seQhinga lokuzonwabisa Ixesha lesi-2 le I-Umbrella Academy yaba yimpumelelo enkulu yokubaleka. Emva kokuqala kweXesha lesi-5, Lusifa (eyaqala njengothotho lweFox ngaphambi kokuba ihlangulwe yiNetflix emva kokurhoxiswa) ichithe iiveki ezintandathu zilandelelana kwiinkqubo eziphambili ze-SVOD ze-Nielsen ngokwemiba yemizuzu ebukelweyo kunye neeveki ezine ezithe ngqo phakathi kwe-10 ephezulu ye-Reelgood yabukela kakhulu iNetflix TV series .
UCobra Kai wayephakathi kwe-10 ephambili ye-Reelgood ebukelwe kakhulu kwimiboniso yeNetflix kwiiveki ezisibhozo ezithe ngqo ukusukela oko yavela kwi-Netflix ka-Agasti 25 (ekuqaleni yayiyintsusa ye-YouTube, kodwa iNetflix ifumene uthotho kwaye izakukhupha isizini entsha ngoJanuwari). Oku kuxhaswa nguNielsen, obonileyo UCobra Kai chitha iiveki ezintlanu phakathi kwe-10 ephezulu kwimizuzu ubukele. Kwinyanga yokuqala, itsale ngaphezulu kwe-6.2 yezigidigidi zemizuzu ibukelwe, okanye emantla ee-103 yezigidi zeeyure. Kubonakala ngathi ivelise indawo enkulu yenkcubeko kune INarcos (itshathi engentla).
Ixesha leTV . Ngaphezulu kweengxelo zabo zeBinge zeBinge kunye neMiboniso kwiNgxelo eziPhakamileyo, ixesha leTV lilanda ukukhula kweveki-ngaphezulu-evekini kwiziqendu ezibukelweyo kwinkqubo enikiweyo kunye neeseshoni zokuzinkcinkca-xa iziqendu ezine okanye nangaphezulu zomdlalo zijongwa kwaye zilandelwa kwi-TV yexesha lokusebenza ngaphakathi usuku olunikiweyo-ukuqulunqa ubungakanani bababukeli baseMelika
Izizathu ezili-13 zokuba kutheni
Ukuphola iiAdventr Sabrina
Ukuhlaselwa kweBly Manor
I-Tiger King: Ukubulala, iMayhem kunye neMadness
Indawo kunye nesitshixo
Ixesha lesibini le Wena (eyaqala njengothotho lwexesha lokuPhila ngaphambi kokufudukela kwiNetflix) yatsala izigidi ezingama-54 zamalungu enyanga kwinyanga yokuqala, ngokwe-Netflix. Ukujongwa kweXesha lesi-2 lika Imfundo yezesondo ayichazwanga esidlangalaleni. Ixesha lesithathu le Ozark utsale i-29 yezigidi kwinyanga yokuqala, nangona uNielsen ekhonkce uthotho njengomdlali ophambili wokuqala weNetflix enabaphulaphuli bemizuzu eli-8,7 yezigidi kwiintsuku zakhe zokuqala ezili-10, Umhla wokugqibela .
Izihloko zeCrossover phakathi kwexesha leTV kunye neParrot Analytics phakathi kwazo ezili-10 zibandakanya I-Umbrella Academy , Lusifa kwaye Imali Heist ( Imali Heist ). Okwangoku, ngokutsho kwezintlu ezili-10 eziphezulu zeNetflix, izihloko ezibini ze-2020 ezona zinexesha elide zilawula uNombolo 1 kulo nyaka Tiger King kwaye I-Queen's Gambit . Nge-Reelgood, nazi iinkqubo eziphambili ze-10 ze-Netflix zakuqala ze-2020 ngokusekwe kwinani lamaxesha avele ngazo kuluhlu lwe-Netflix lwemihla ngemihla oluphezulu lwe-10 e-US ukusukela nge-27 kaFebruwari ukuya nge-8 kaDisemba.
Kwaye nantsi indlela ezintlanu zethu eziphezulu kuzo zonke izintlu ezintathu —Ingwe Kumkani , Imali Heist , I-Umbrella Academy , I-Queen's Gambit- thelekisa kuTrends wendlela yokukhangela.
Oku kuphakamisa ukuba Tiger King , I-Umbrella Academy kwaye Lusifa ivelise owona mdla we-intanethi phakathi koku kudityaniswe ngokukhululekileyo ezintlanu.
Kodwa iNetflix ithi I-Queen's Gambit kurekhodwe izimvo zasekhaya ezizizigidi ezingama-62 kwiintsuku zayo zokuqala ezingama-28, isenza ezona ziqendu zikhulu zibhaliweyo zinomda ukuza kuthi ga ngoku, ngelixa Tiger King amanqaku angama-64 ezigidi. Ukuthelekisa, i-2019's Witcher yaqhekeka njengenye yeentsingiselo ezinkulu zeNetflix ezihlala zineembono zasekhaya ezizigidi ezingama-76 (ethi iNetflix ibalwe njengayo nayiphi na iakhawunti yelungu ebukele ubuncinci imizuzu emibini) kwiiveki zayo zokuqala ezine. Izikhonkwane zeNielsen Tiger King kwizigidi ezingama-34.3 zababukeli ababodwa kwiintsuku zokuqala ezili-10 zokukhutshwa eMelika.
I-Queen's Gambit Uchithe iiveki ezintathu zilandelelana kwi-10 ye-Nielsen ephezulu kunye nomntla we-3.8 yezigidigidi zemizuzu ejonge (ngaphezulu kwe-63 yezigidi zeeyure) kwaye uhlala kwi-10 ephezulu ye-Reelgood okoko kwaqala ngo-Okthobha 23. (Uluhlu lukaNielsen ziiveki ezine ezilibazisekileyo, yiyo loo nto Unenyanga epheleleyo yedatha kwi I-Queen's Gambit okwangoku.) Kodwa kude kubhengezwe okuncinci Lusifa ivelise ngaphezulu kwe-5 yeebhiliyoni zemizuzu iyonke ebukelweyo (okanye emantla e-83 yezigidi zeeyure) kwiiveki ezintathu zokuqala zokufumaneka kweXesha lesi-5, ngedatha yeNielsen. Kwaye kwakhona, ibinamaxesha amahlanu eziqephu ezikhoyo ukuze zisetyenziswe, xa kuthelekiswa I-Queen's Gambit Iziqendu ezisixhenxe zizonke.
Uthotho lwesiJamani Kumnyama , omnye walo mbhali Imiboniso oyithandayo kwimemori yakutshanje , Kuyamangalisa ukuba kwenziwe uluhlu lweParrot Analytics kunye neTV ixesha elipheleleyo emva kokubonisa ixesha lokugqibela ngoJuni. Olu luhlu luhamba phambili kwi-Reelgood's Top 10 ebukele kakhulu uthotho lweNetflix ukusukela nge-19 kaJuni ukukhutshwa ukuya nge-30 kaSeptemba, ebonakala yomelele ngokungaqhelekanga kuthotho olungelolwesiNgesi olungazange luvele kumanqaku kaNielsen okanye enze isifungo esibalulekileyo kwiGoogle Trends.
Isithsaba inokwenza indlela yayo kule ncoko ngokuphela konyaka. Kwakhona kumxube wale milinganiso yokuthandwa ngabantu abakumgangatho ophezulu zezi Tiger King , Wena, UCobra Kai , Ozark, INarcos, iiBhanki zangaphandle kwaye mhlawumbi Ukuhlaselwa kweBly Manor kwaye Kumnyama ngelixa ukugcinwa kwezinto eziphambili njenge Izinto ezingaqhelekanga kwaye Witcher ukunceda ukumisa ilayibrari yeNetflix.
'Ukuyifakela' i-GIF-Cap: Ukuma kokugqibela eCroquembouche
UBill Maher: 'Ndinaye' okanye 'Ndinobudenge'
Yeyiphi inkonzo yokutya yokuBhalisa ekufuneka uyiZamile? I-infographic yethu iya kukunceda ukhethe
U-richard meier kwipaki yokulindela
I-thc vape ipenji yeekhatyuli zeempawu
Inombolo yakhe yomnxeba yile
9/11 iinqaba ezingamawele ngaphakathi kwiinqaba ezingamawele
phinda ujonge ukujonga umnxeba ngedilesi